यौन स्वास्थ्य Archives - HealthyKhabar
जोलियाट– अमेरिकाको इन्डियाना राज्यका पूर्व चिकित्सकको इलिनोइसस्थित घरबाट दुई हजारभन्दा बढी मानव भ्रुणका अवशेष फेला परेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने यी चिकित्सकले भ्रुणलाई औषधिको प्रयोग गरी सुरक्षित राखेको पाइएको छ । डा उल्रीच क्लोपफर नाम गरेका ती चिकित्सकको गत साता निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ । विल काउन्टी शेरिफ कार्यालयले शुक्रबार अबेर एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी उक्त घटनामा डा क्लोपफर संलग्न रहेको जनाएको छ । डा उल्रीचको परिवारले भ्रुणका बारेमा प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो । प्रहरी कार्यालयले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा दुई हजार २४६ वटा सुरक्षित भ्रुण भेटिएको जनाएको छ । तर मेडिकल प्रक्रिया पूरा गरे वा नगरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको भनाई छ । प्रहरीले उक्त घटनाका बारेमा अनुसन्धान शुरु गरिसकेको जनाएको छ । डा क्लोपफरको गत सेप्टेम्बर ३ मा मृत्यु भएको थियो । इन्डियानाको साउथ बेन्डमा लामो समयदेखि उनले गर्भपतन सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेका थिए । तर सन् २०१५ देखि इन्डियाना राज्यले…
यसरी बनाउनुहोस् तान्त्रिक यौन सम्बन्ध
तान्त्रिक यौनले व्यक्तिगत सम्बन्धलाई बलियो बनाउनका लागि एकअर्कालाई गहिराईसम्म बुझ्नु र आनन्ददायक अन्तरंग सम्बन्ध बनाउने कुरामा जोड दिन्छ । तान्त्रितक यौनका लागि छोटो समयले पुग्दैन । यो क्षणिक प्रेमको लागि पनि होइन । ‘यस माध्यामबाट तपाईंभित्र पार्टनरप्रति अगाध श्रद्धा जाग्नुपर्छ’ भनिएको छ तान्त्रिक सेक्स मेड सिम्पलमा । यसको अर्थ हो भने जब तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग यौन सम्बन्ध बनाइरहनुभएको छ, तब तपाईंको मस्तिष्क अन्यत्र भड्किनु हुँदैन । तपाईंको मन-मस्तिष्कमा आफ्नो पार्टनर नै रहनुपर्छ । तान्त्रिक यौन सम्बन्ध बनाउन यसो गर्नुहोस् -यसका लागि एक खुला, शान्त र एकान्त कोठा आवश्यक छ । -कोठा अँध्यारो हुनुपर्छ र त्यसमा मैनबत्ती बालिएको हुनुपर्छ । मैन बत्तीको धिमा प्रकाश चाहिन्छ । -ओछ्यानस सहज र फराकिलो हुनुपर्छ । दुबै आरमदायक सिरानीको बीच एककअर्काको नजिक बस्नुपर्छ । -एकअर्काको आँखामा गहिरिएर हेर्नुपर्छ, जस्तो तपाईं उनलाई बताउन चाहनुहुन्छ कि तपाईं एक इमान्दार र समर्पित पार्टनर हो । -एकअर्काले तालमेल मिलाएर समान गतिमा सास लिनुपर्छ । -आफ्नो हात उनको शरीरभन्दा दुई…
मन्त्रीले गरे यौन दुर्व्यवहार, पिएले राखे यौन प्रस्ताव
सरकारको उच्च तहमा हुने यौन दुर्व्यवहारका घटनाले यतिवेला अफगानिस्तान तरंगित बनेको छ । महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारका घटना वृद्धि भइरहेको बताइरहेका वेला ती घटनामा सरकारी अधिकारी नै संलग्न रहेको विषयले युद्धको चपेटामा परेको देश तरंगित बनेको हो । मन्त्रीले गरे यौन दुर्व्यवहार एक महिला कर्मचारीले आफूमाथि पूर्वमन्त्रीले बारम्बार यौन दुर्व्यवहार गरेको गुनासो गरेकी छिन् । यौन दुर्व्यवहारबारे प्रतिकार गर्दा पूर्वमन्त्री भौतिक आक्रमणमा उत्रेको उनको गुनासो छ । ‘उसले प्रत्यक्ष रूपमा यौन प्रस्ताव गर्यो । मजस्तो महिलालाई मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले त्यस्तो प्रस्ताव गर्लान् भनेर सोचेकी पनि थिइनँ । उसको प्रस्ताव सुनेर भाग्न खोज्दा उसले मेरो हात समातेर आफ्नो कार्यकक्ष पछाडिको कोठामा लग्यो।’ मन्त्रीको दुर्व्यवहारपछि उनले भोलिपल्टै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । तर, मन्त्रीविरुद्ध उजुरी दिन सकिनन् । ‘दुर्व्यवहारका घटना सार्वजनिक गर्दा सबैजनाले पीडितलाई नै दोषी मान्छन्,’ उनी भन्छिन् । उनका अनुसार ती मन्त्रीले अन्य दुईजना महिला कर्मचारीलाई पनि दुर्व्यवहार गरेका थिए । जागिर, यौन-प्रस्ताव एक महिलाले सरकारी जागिरका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । उनलाई अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीका सहयोगीले नै यौन–प्रस्ताव गरेका…
काठमाडौँ, ८भदौ । पच्चीस वर्षीया बिना (परिवर्तित नाम) अहिले पाठेघरमा सङ्क्रमण भएर उपचाररत हुनुहुन्छ । स्थायी घर मोरङ बताउने उहाँ हाल काठमाडौँमा बसेर स्त्री तथा प्रसूति रोग अस्पताल थापाथलीमा पाठेघरको उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ । दुई वर्ष पहिले विवाह भएकी बिनाको योजनाबिनै गर्भ रह्यो । श्रीमान् र श्रीमतीबीच तत्काल बच्चा नजन्माउने सल्लाह अनुसार विराटनगर बजारकै औषधि पसलेकहाँबाट एक हजार रुपियाँ तिरेर घरैमा औषधि ल्याएर खानुभयो । औषधि खाएको सात÷आठ घण्टामा गर्भपतन त भयो तर रगत चाहिँ धेरै बग्यो । औषधिको असरका कारण उहाँको पाठेघरमा प्वाल परिसकेको र पाठेघरमा थप सङ्क्रमण हुन नदिन पाठेघर नै फ्याल्नुपर्ने भएपछि ठूलो पीडामा हुनुहुन्छ । बिनाजस्तो शिक्षित र सहरमा बस्नेलाई त गर्भपतनको औषधि कस्तो स्वास्थ्य संस्था र कस्ता चिकित्सकको सल्लाहमा खाने भन्ने जानकारी रहेनछ । अझ अशिक्षित र दूरदराजका महिलाको हालत के होला ? यसबाटै पनि सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । औषधिको प्रयोग होस् वा औजारबाट गरिने गर्भपतन होस् दुवै विधिबाट गर्ने गर्भपतनका लागि सरकारले चिकित्सक,…
दमौली, ७ भदौ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन महिलाको आकर्षण बढेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेलाई सरकारले यातायात खर्चस्वरुप राहत रकम उपलब्ध गराएपछि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने महिलाको आकर्षण बढेको हो । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ स्थित आँबुखैरेनी स्वास्थ्यचौकीमा सुरक्षित सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ८६ जनाले सुरक्षित सुत्केरी गराउएको उक्त स्वास्थ्यचौकीमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १०५ जनाले सुरक्षित सुत्केरी गराएको स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सिनियर अहेब अगमराज उपाध्यायले जानकारी दिए । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित सुत्केरी गराउनेलाई सङ्घीय सरकारले यातायात खर्चस्वरुप रु दुई हजार उपलब्ध गराउँदै आएकामा आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि थप रु एक हजार उपलब्ध गराएपछि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने महिलाको आकर्षण बढेको उपाध्यायले बताए । त्यसबाहेक सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नियमित चार पटक गर्भवती जाँच गराउनेलाई थप रु आठ सय र नवजात बच्चाआमा दुवैलाई दुई÷दुई जोर कपडा उपलब्ध गराइएको छ । उपाध्यायका अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित रुपमा…
भानु नगरपालिकाको पाँच वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना
तनहुँ, १६ साउन । तनहुँको भानु नगरपालिका कार्यालयले पाँच वटा वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेको छ । बाह्र वटा वडा कार्यालय रहेको यस नगरपालिकामा पहिलो चरणमा वडा नं ११ रुपाकोट स्वास्थ्य चौकी, वडा नं भानु स्वास्थ्य चौकी, वडा नं पुरानडिही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नं ज्यामरुक स्वास्थ्य चौकी र वडा नं वसन्तपुर स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ । भानु नगरपालिकाको १२ वटै वडामा स्वास्थ्य एकाइ स्थापना भइसकेकाले क्रमिकरुपमा सबै स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत सुनिल पाण्डेले जानकारी दिए । कतिपय स्वास्थ्य चौकीमा जग्गाको अभाव, ऐलानी जग्गाका कारण पनि बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्न नसकिएको हो । उनले भने, “बर्थिङ सेन्टरमा आएर शिशु जन्माउनेलाई प्रोत्साहनस्वरुप एम्बुलेन्स सेवामा निःशुल्क व्यवस्था मिलाइएको छ ।” नगरपालिकाले यही भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ । आमा र नवजात शिशु दुवैको स्वास्थ्य सुरक्षा राख्न र घरमै प्रसूति गराउनेलाई निरुत्साहित गर्न एम्बुलेन्स भाडा नगरपालिकाले तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको…
के हो हेपाटाइटिस बी ? लक्षण र रोकथामका उपाय सहित
हेपाटाइटिस बी भाइरसबाट सर्ने रोग हो । विश्वमा ४० करोड व्यक्ति यस रोगका सिकार भइरहेका छन् । यीमध्ये १५ देखि ४० प्रतिशत मानिस सिरोसिस वा लिभर क्यान्सरबाट पीडित छन् भने कसैको यही रोगका कारण अकालमा मृत्यु समेत भइरहेको छ । विकसित देशहरु अमेरिका र यूरोपमा एक्युट लिभर फेलरका बिरामीको समयमा लिभर ट्रान्सप्लान्टेसनले गर्दा मृत्यु घटेर गएको छ र वृहत् खोप कार्यक्रमले गर्दा नयाँ बिरामीको संख्या घटेको छ भने क्रोनिक हेपाटाइटिस बी र लिभर क्यान्सरका बिरामी बढिरहेका छन् । सन् १९८० को सुरुबाट हेपाटाईटिस बीको विरुद्ध प्रभावकारी खोप कार्यक्रम थालेपछि यस रोगको महामारीमा कमी आएको छ । यो रोग संसारभर फैलिएको छ । यो रोगले अफ्रिकी मुलुकका मानिस बढी प्रभावित छन् । त्यहाँ करीब ८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा यो रोगबाट ग्रस्त छन् । जसलाई क्रोनिक हेपाटाइउिटस बी क्यारियर भनिन्छ । त्यस्ता क्यारियरहरु ६० देखि ८० प्रतिशत जीवनको कुनै पनि समयमा रोगको सिकार बन्छन् ।त्यस्तै, नेपालमा पनि ० दशमलब ८ प्रतिशत…
वीरगञ्‍ज ५ साउन । असुरक्षित गर्भपतनका कारण पर्सामा २० वर्षीया युवतीको ज्यान गएको छ। असुरक्षित गर्भपतनका कारण पर्साको पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर ६ की २० वर्षीय सावित्रीकुमारी शर्माको ज्यान गएको हो। साबित्री आफू खुशी भारत रक्सौल गई ५ महिनाको गर्भ असुरक्षित गर्भपतन गराउने क्रममा गम्भिर बिरामी भएकी थिइन्। उनको अवस्था गम्भीर भएपछि वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा उपचारको लागि भर्ना गरिएकोमा ज्यान गएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले अबैध सम्बन्ध राखी साबित्रीलाई गर्भवती बनाएको आरोपमा सोही ठाउका सिकेन्द्र प्रसाद चौहानलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका सिकेन्द्रले अवैध यौन सम्बन्ध राखी सावित्रीलाई गर्भवती बनाएका थिए।अवैध यौन सम्बन्धबाट गर्भ रहेपछि सिकेन्द्र र साबित्री दुबैजनाले आफु खुशी भारतको रक्सौल गई गर्भपतन गराउन खोजेका थिए। मृतक युवतीको शबलाई पोष्टमार्टमको लागि नारायणी अस्पतालमा राखिएको छ। पक्राउ परेका सिकेन्द्रमाथि कर्तव्‍य ज्यान मुद्दा दर्ता गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको पर्साका प्रहरी प्रबक्ता एवम प्रहरी नायब उपरीक्षक अन्न्तराम शर्माले जानकारी दिए।
शिशुको लागि अमृत मानिने स्तन शारिरिक सम्पर्कको उत्तेजित अंगपनि हो । स्तन शिशुका लागि दूध बनाउन मात्र होइन् । शारिरिक सम्पर्कका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । किशोरावस्थामा पुगेपछि हार्मोनको प्रभावले युवतीहरूमा स्तनको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ । स्तनको वृद्धि धेरैजसोमा ११ वर्षको उमेरमा सुरु भएर १५ वर्षमा पूरा हुन्छ । स्तनको आकार तथा आकृतिको महिलाको मानसिकतामा महत्वपूर्ण प्रभाव हुन सक्छ । स्तनसँग आत्मसम्मानको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ । यसको आकार वा आकृतिका बारेमा स्वास्थ्यभन्दा सुन्दरताका कारणले बढी चिन्ता गरिने कुरा अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । व्यक्तिअनुरूप स्तनको स्वरूप एवं आकारमा धेरै विविधता पाइन्छ । स्तनमा भएका तन्तुका आधारमा यो कुनै ठूलो वा सानो हुन्छ । सामान्यतयाः स्तनको आकार वा स्वरूपलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख कुरा निम्न छन्ः स्तनका तन्तुको मात्रा, पारिवारिक इतिहास, उमेर, तौल बढ्नु वा घट्नु, स्तनको छालाको मोटाइ वा तन्कन सक्ने गुण, रागरस हार्मोनहरूको प्रभाव । स्तनको विकासका क्रममा यसको आकार र कडापनमा पनि परिवर्तन हुन्छ ।…
के हो सेक्स ? सेक्सबारे यसरी परिवर्तन हुन थालेको छ सोच!
नेपालमा सेक्स यस्तो मसला हो जसमा रुची त सबैको छ तर यसबारे कुरा गर्न सबैजना हिच्किचाउँछन् । पुरुषले यदाकदा सेक्स बारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् तर महिलाले यसबारे खुलेर कुरा गर्न चाहेको खण्डमा उनीहरुलाई गलत तरिकाले हेरिन्छ । सेक्सको मामलामा महिला लाज र सामाजिक बन्देजका कारण धेरैजसो मौन नै रहन्छन् । हुन त प्राचीन नेपाली समाज शारीरिक सम्बन्धको विषयमा निकै खुल्ला विचारको थियो । यसको उदाहरण हामीले विभिन्न मन्दिरको टुँडालहरुमा पनि देख्न सक्छौं । तर समाज जतिजति अघि बढ्यो हाम्रो देश शारीरिक सम्बन्धप्रति त्यति नै संकुचित हुँदै गयो । महिला–पुरुषको यौन सम्बन्धसँग जोडिएका कुरालाई गोप्य राखियो, यसमाथि पहरेदारी पनि भयो । यद्यपि, अब यौन सम्बन्धको विषयमा पुनः एउटा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ । यस्तो परिवर्तन जुन क्रान्तिकारी छ । प्रयोगशालामा बच्चा जन्माउने ट्रेन्ड बढ्नेछः प्राकृतिक रुपमा सेक्सको अर्थ बच्चा जन्माउने र परिवार बढाउनेसम्म नै सिमित थियो । तर विज्ञानले अब सेक्स बिना नै बच्चा जन्माउने वातावरण बनाइदिएको छ ।…
सप्तरी२२ असार । एचआइभी सङ्क्रमितमाथि समाजको दृष्टिकोण, लाञ्छना र भेदभावलाई समुदायस्तरबाटै न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एचआइभी सङ्क्रमितमाथि हुने लाञ्छना तथा भेदभाव न्यूनीकरणका सम्बन्धमा आज राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा सरोकारवालासँग आयोजित अन्तक्र्रियामा जोड दिइएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको सहयोगमा उक्त अस्पतालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य स्वयंसेविका र सरोकारवालालाई सो विषयमा जानकारी दिइएको एचआइभी÷एड्सका परमर्शदाता सुनिता यादवले बताउनुभयो । सप्तरीमा २१२ एचआइभी सङ्क्रमित रहे पनि लोकलाज र चेतनाको कमीले एचआइभी सङ्क्रमित औषधोपचारका लागि खुलेर अगाडि नआउने गरेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा चुमनलाल दासले जानकारी दिनुभयो । सुरक्षा कवच अपनाऔँ तर भेदभाव नगराँै भन्दै उहाँले सन् २०२० सम्ममा ९० प्रतिशत सङ्क्रमित पत्ता लगाएर तिनको उपचार गर्ने र ९० प्रतिशत नै जिवाणु कम गर्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी दिनुभयो । निर्मलीकरण नगरिएका सिरिञ्ज र ब्लेडको साझा प्रयोगबाट, ¥यालबाट, एचआइभी सङ्क्रमितको रगतबाट, शरीरका अङ्ग प्रत्यारोपण, सङ्क्रमित आमाले गर्भधारण गर्दा पनि…
औषधिबाट गरिने गर्भपतन विकराल समस्या बन्दै
कास्की, २० असार । शहरी क्षेत्रमा औषधि सेवन गरेर गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले आज पोखरामा आयोजना गरेको ‘स्वास्थ्य र सुरक्षित गर्भपतन’ सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागिले चिकित्सकको सल्लाहबिना औषधि पसलमा गएर पारासिटामोलको चक्कीजस्तै गर्भपतन गराउने औषधि उपयोग गर्दा भविष्यमा बाँझोपन र मातृ मृत्युदरको समस्या आउनेतर्फ सचेत बन्नुपर्नेमा जोड दिए । स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. गिरीधारी पौडेलले परिवार नियोजनको साधन जस्तो गरी गर्भपतनलाई उपयोग गर्नाले भविष्यमा बाँझोपनको समस्या आउने र सूचीकृत नभएको स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भपतनका औषधि बिक्री वितरण हुँदा महिलाको स्वास्थ्यमा हानी पु¥याइरहेको बताए । कानूनी मान्यता पाएसँगै सरकारले गर्भपतन सेवा विस्तार गरेपनि ४२ प्रतिशतले मात्र सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराएको र बाँकीले अझैपनि असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराएकाले यस सम्बन्धी जनचेतना क्याम्पस तथा समुदायमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आश्यकता औल्याइयो । नेपालमा महिलाको राजीखुशीले १२ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै जबर्जस्ती वा हाडनाता करणीवाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ तथा…
प्रसूति गराउने क्रममा लापरबाही गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर, अस्पताल र चिकित्सकले पाँच- पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
काठमाडौं,१८ असार । सर्वोच्च अदालतले थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल र उपचारमा खटिएका चिकित्सकले उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर गरेको छ । अस्पतालको तर्फबाट पाँच लाख र उपचारमा सम्लग्न चिकित्सक ठा. अचला बैधले पाँच लाख क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको हो । ०६३ चैत २ गते सुत्केरी गराउने क्रममा भ्याकुम प्रयोग गरी बच्चा निकालिएको थियो । त्यसले बच्चालाई असर पारेको भन्दै पीडित सूर्यकुमारी अधिकारीले २ साउन, ०६४ मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन् । अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाहीले नवजात शिशुको बायाँ खुट्टा बांगिएको, टाउको पछाडि फर्केको, शरीरको बायाँ भाग नचल्ने भएको, अनुहार भित्र पसेको, निधार र नाकलगायतका अंगमा चोट लागेको जिकिर गरिएको थियो । अधिकारीले ८२ लाख ३० हजार माग गरेकी थिइन् । त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लापरबाही ठहर गर्दै अस्पताल र चिकित्सकलाई पाँच÷पाँच लाख क्षतिपूर्ति…